बुद्ध एयरको जहाज झन्डै दुर्घटना, कति यात्रु थिए ? थप जानकारी सहित — Imandarmedia.com
बुद्ध एयरको जहाज झन्डै दुर्घटना, कति यात्रु थिए ? थप जानकारी सहित
काठमाडौं। पटक–पटक विभिन्न दुर्घटना सार्वजनिक हुदै सिंगो कम्पनिमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसैबीच, आज पनि अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ। बुद्ध एयरको जहाज खरायोसँग ठोक्किएर दुर्घटनाबाट ‘बालबाल’ वचेको छ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा जहाजमा खरायो ठोक्किएको हो ।बुद्ध एयर, नेपालगञ्जका व्यवस्थापक विनित शाहले जहाज ल्यान्ड हुने क्रममा खरायो ठोक्किएको बताए। घटना राति पौने आठ बजेको हो ।
जहाजसँग ठोक्किएको खरायोको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।जहाजमा खरायो ठोक्किएपछि केही समय उडान रोकिएको र अहिले उडान सुचारु भएको शाहले वताए ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा यसअघि पटक–पटक जहाजमा बँदेल र स्याल ठोक्किएको थियो।नेपालगन्ज विमानस्थलको धावनमार्गमा बारम्बार बँदेल, स्याल, सुँगुर र अन्य वन्यजन्तु ठोकिदै आएका छन् ।
विमानस्थलभित्र घाँस काट्न आउने स्थानीयले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि तार छाडेर वन्यजन्तु भित्र पसेर दुर्घटना हुने गरेको बताए । धावनमार्ग नजिक रहेको झाडीमा जंगली जनावर रहेकाले विमानस्थलमा जनावर ठोक्किने जोखिम रहँदै आएको छ।
१९ देखि ९० किलो मिटर सम्म अर्थात ५० नटिकल माइलसम्म एप्रोच कन्ट्रोल टावरले र त्यसपछि तुल्सीपुर नपुग्दासम्म एरिया कन्ट्रोल टावरले मार्गनिर्देशन गर्छ । तुल्सीपुर पुगेपछि नेपालगन्ज टावरले विमानलाई गाइड गर्छ। नेपालगन्जबाट टीकापुर पुगेपछि विमान धनगडी टावरको कन्ट्रोलमा हुन्छ।